Shirib - Gpedia, Your Encyclopedia
Shirib eray ahaan wuxuu kuu tilmaamayaa shir ama kulan lagu wada hadlayo ama bandhig dhaqameed, sidaa awgeed, waxaa la yiraahdaa meeshii socodku ku bato ama la isaga daba noqnoqdo Shirib ama shirbayn, shiribku waa suugaan aan qof walliba haweysan karin, waa hubaal inaysan u sahlanayn qof walba inuu sameeyo, haddii aanu aqoon fiican u lahayn habdhaca iyo khaafiyadiisa gaarka ah. Waxaa keliya oo shirbi kara qof aqoon durugsan u leh oo farshaxannimadiisa kuna xeeldheer.
1 Qaabka Shiribka
2 Dhismaha Shiribka
3 Gobollada laga shirbo
4 Tusaalaha Shiribka
5 Fasiraad Shirib
6 Ujeedada Shiribka
Shiribka waxaa lagama maarmaan ah inuu ka unkamo ugu yaraan laba meeris, halka suugaanta kale hal meeris keliya awood u leeyahay inuu meel istaago, marka laga reebo Gabayga iyo Guurowga, Shiribka maadaama aan hal meeris keliya buuxin karin muggii iyo dhumucdii Shiribka, oo haddaan la helin meeris ama tuduc labaad oo tiirisa isla ujeedkiina ka hadlaysa duluc iyo tusaale is qeexaya, xarafka laga unkay Shiribka uusan meeriska galin laba kol ugu yaraan, waxaa ka dhalanaya deelqaaf iyo meeris jaban oo ku yimaada miisaanka iyo khaafiyadda Miisaanka shiribka.
Inta badan Shiribku waa 8-8 alan balse, sida ugu quruxda badan uguna habboon waa in Shiribka xarafka laga billaabayo laba jeer soo galo, waana farshaxannimada ugu sarreysa, way dhacdaa in mararka qaarkood laga maarmo, balse, bilicdiisa ayaa maax dumaysa.
Gobollada laga shirbo
Shiribku wuxuu ka mid yahay suugaanta murtida iyo mugga weyn, ee geyigeena aad looga xiiseeyo, inkastoo ay jirto in gobollo gaara aad looga adeegsado Shiribka, haddana, waa laga wada yaqaan inta Soomaalidu degto gebi ahaan, Shiribka waxaa inta badan laga adeegsadaa ama si gaara u adeegsada Gobollada dhexe Mudug, Galguduud, Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Banaadir iyo Shabeellaha Hoose.
Reer Todobaatan waa tageen
Dhulkaani dadka waw dhaxays
Reer Todobaatan waa tageen Talo nin Tuur laheey u taal:- Wuxuu ula jeedaa Laashinku halkan in waayeelkii socdeen, oo badankood galbadeen, geeri ama gabow, taladuna u taallo nin Tuur leh. “Tuur”ku waa timo badan oo sidii dhaqanku ahaa dhallinyaradu daysan jirtay waagii hore. “Tuur” waxaa kaloo adeegsadaa wax walboo soo taagan kuusan isu tagay, waxaa la yiraa: “Tuur Carro ah” ee halkan loogama jeedo “Tuur” oo ah dhabar godnaanta ama cudurka fajaha ee duudka uga dhaca dadka, taana waxaa ugu wacan qoraalka farta soomaaliga oo aan kala saarin dhawaqa iyo dhigaalka labadaas macne, murtidan waxay ina tusaysaa in mar walba is bedelka laga sugayo dhallinyarada iyo barbaarta.
Dhulkaani dadka waw dhaxays, Dhiishaase ninba meel dhigtaa:- Dhulka Ilaahay sameeyey dadka wuu ka dhaxeeyaa, balse, qof weliba meel u gaar ah ayuu deegaan ahaan iyo dal ahaan u leeyahay, waxay xigmaddani ina baraysaa in adduunka kala duwanaanshaha deegaamada dalalka dibedda iyo gudaha laftiisa in deegaan walba dad u gaar ahi dego, oo Eebbe ku abuuray oo hantidooda ka dhigay, waa hadal kooban oo xambaarsan halmuceed mug iyo miisaanba leh.
Saddex walxaato Ya ku taal, sadex kaleeto yeeli mee
Yuhuuda gaalo la yiraah, Yaasiin aqrista yeeli mee!
Yaxaas galbeedna yeeli maa, hortiisa yuulaxyuulaxey
Yaasiin madoone yeeli maa, Yibir ku yaal yaddawga gooy.
Meerisyadan waxay xanbaarsan yihiin macne weyn, laga yaabee inaan qofku hore ka fahmin, haddaanu Shirib aqoon ahayn ama loo faahfaahin.
Saddexdan meeris ee shiribka ah.
Yuhuudda gaalo la yiraah yaasiin aqrista yeeli mee:- Yuhuudda oo aan wada naqaan waxaan wada ognahay i naysan ka suuragalayn sida Abwaanku sheegay in haddii Kitaabka Eebbe loo keeno inay aqristaan aysan rabin, oo horeba u diideen, waayo waa caddowga ugu weyn uguna neceb diinta Islaamka.
Yaxaas galbeedna yeeli maa hortiisa yuulax yuulaxey:- Yaxaas galabnimo webi ama casar iska dabaalo isaga oo gaajaysan yeeli mayo, wuxuu ka xigaa inuu laba kuu kala jaro ama weerar ba’an kugu soo qaado, badbaadadase Allaa haya, isagase talada uguma jirto inaad iska dabaalato, adigoo nabad qaba.
Yuulax yuulaxax caalashaan inaad isaga hor xaragooto ama laafiyooto, waana fal tilmaamaya dhaqdhaqaaqa dabaalashada ama oo la mid ah dhawaqyada aan codayno af Soomaali ahaan, Miririqlayn, Furdug, qardadac iwm.
Yaasiin madoone yeeli maa yibir ku yaal yaddowga gooy:- Yaasiin ma doone waa Mas Wed la soo bax ama Mar soo bax qoloba si u taqaan. Yibir waa cayayaanka xoolaha iyo xayawaanka kale cuna, oo muddo ku dhegganaada waxaa kale oo loo yaqaana Gafane.
Sadexdaa meeris ayaa waxay xanbaarsan yihiin xigmadda intaa qarada le'eg, oo ah saddex waxyaabood oo ay adag tahay suuragalnimadooda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shirib&oldid=169016"